MUUQAAL: Dhalinyarada Gaalkacayo oo Dhigay Banaanbax Xoogan (Daawo) | KALSHAALE
MUUQAAL: Dhalinyarada Gaalkacayo oo Dhigay Banaanbax Xoogan (Daawo)
Oct 9, 2018 - 3 Aragtiyood
Gaalkacyo ( Kalshaale ) Magaalada Gaalkacyo Waxaa ka dhac Isku soo bax ay soo Qaban qaabiyeen Dhalinyaradda magaalada Gaalkacyo, Kuwaasi oo siwayn uga Cadhooday Dilka loo gaysanayo Haldoorka magaalada.
” Maaha wax loo dulqaadan karo in maalin walba aqoonyahannada iyo haldoorrada bulshada gudaha magaalada Gaalkacyo si micno darro ah laysaga dilo “
Sidoo kale Dhalinyaradda ayaa eedayn dusha uga tuuray Odayaasha magaalada oo aan Ogolayn in Shareecada la Waafajiyo dadka gaysta dilalka Haldoorka Bulshada.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (3)
Alshabaabka madaxa soo duubta iyo nijaasta soo dirtay waxaa looga adkaan karaa in macal caruurta iyo hooyooinka hub la siiyo,
Qof masaajid kasoo marka toogtaan waa in dadka meesha ka dhow oo dhan bastoolado lasoo baxaan oo kun xabadood ku dhacdo daanyeer wax dilay.
Hadda waxaa laga yaabaa in hal nin 10 jeer wax dilay goobtana ka fakado oo inta dadka dhex ordo nabad Baraxley ku galo.
Galkacyo waa in Wildwest noqotaa, qofka la tuhmo shoot first and ask quetions later.
Meesha qabyaalad iyo diin baa la isku dhexwalaaqayaa.
Mudaharaad kaa celin maayo dad fowdo wax aan ahayn aqoon, shantaada ayaa kaa celin karta.
Qodka wax dilaya hadduu ogyahay in dhimanayo inta 100 dolar qaato waxsoo dil ma yeeleen.
Mid la qabtay oo Eelay ahaa wuxuu sheegay in 150$ la siiyey, qof dhan naftiisa 150 dolar oo ku qadeeyo ayaa kala qiime badan.
Magaalada dhan oo la isdhexyaacayo waa in waxlaga bedelaa oo darbiyo iyo silig la badiyaa si sahal ugu gudbin koofurta,
Magaalada bar waa in secret Securiy, Pista la qoraa., waa haddii nabad la rabo.
Hadda inta dadka madaxa ku dhuftaan ayey ilaa Xaradheere xagee u socotaa la oranaynin.
Nabad baan rabnaa kute, ma cadowga ku dilaya ayaa nabad kaa raba?
Meesha ciidan ku horfadhiya oo la dagaasho ma joogo waa nin terrorist ah adna waa terror u isticmaajo, markaas ayuu ku afgaranayaa.
Inta ka horeysa iska mudaharaada oo wada Qiiro Jabanka.
inkastoo sida aad tirri aan kugu raacsanahay in qof kasta hub qaato Kaalgacyo iyo meel kasta, oo argagixisada alshabaab iska dhaaf qofka ahee, xataa qofka looga shakiyo daanyeerniimadooda oo kale, in la dillo. Waxaan kaloon kugu raacsanahay waxyaabo badan oo aad kor kusheegtay.
Laakiin, waxaan ku xasuusin in arrinkaan eey tahay doorooyinkiinii oo gurriga imaaday si eey idinkugu dhalaan waxii aad u dhigteen, nahmean, “the chickens have come home to roost” Waa munaafaqnimadiinii waxa meesha kasocda. Waliba la’isma gaarin.
Mar hadii dowladnimada Somaliya aad kajeclaateen maamul qabiil, iyo in aad kaligiin calamo been ah tolataan, adinkana ma noolaaneeysaan, Somalida kalena ma noolaanayaan. Halawada dago.
Hadii kale, ka daaya dowlad kasta oo Somaliya leedahay in aad qastaan, oo dumisaan adinka oo si qabiil ah u abaabulan. Iyada oo waliba dowladaas dhexe aad xilal iyo jagooyin muhiim ah ka heeysaan. Laakiin, ma rabtaan. Kuwa iyo dadka kale ee Somaliyeedna waa daanyeero oo ma fahamsanna.
SHORT FILM: ZAKI , BISHAARO
QISADA KINSI EE MARAYKANKA
Madaxwayne Farmaajo oo Muqdisho Kusoo Wajahan iyo Kulankii La Filayey ee Muuse Biixi oo Meesha ka baxay
Jabuuti ( Kalshaale ) Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wada hadallo miradhal ...
Muuqaal: Faarax Macalim oo ka Qayb galay dood uu TV-ga Kenya uga hadlay Xiisada Somalia iyo Kenya (Daawo)
Nairobi ( Kalshaale ) Guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamanka dalka Kenya, Faarax Macallin ...
Daawo: Faratoon oo ka hadlay Safarka Muuse Biixi ku aaday dalka Itoobiya
Hargeisa ( Kalshaale ) Sidii aanu Horay u baahinay Waxaa maanta magaalada hargeisa ka ...
Muuse Biixi oo Hargeisa ka dhoofay iyo Kulamada la Filayo ee Addis-Ababa
Hargeisa ( Kalshaale ) Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa ...
Wargeysyada dalka Kenya oo weeraray dowladooda, Kana Faalooday Xiisada Soomaaliya
Nairobi ( Kalshaale ) Qormooyin isdaba joog ah ayay wargeysyada gudaha ka qoreen khilaafka ...